မတ်လ 31, 2009 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု3comments
ဒီလွှတ်ပေးရေးအတွက်အဘယ်သူမျှမ features အသစ်တွေကိုရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုသူများထံမှတစ်ဦးထက်ပိုအစိုင်အခဲကုဒ်အခြေစိုက်စခန်းမှတ်ချက်များနှင့်အစီရင်ခံကျေးဇူးတင်ကိုယ်စားပြုသလဲ.
ငါတို့ကဲ့သို့အစဉ်အမြဲပြုလုပ်စမ်းသပ်ဖို့သငျသညျတိုက်တွန်းနှင့် – ကျွန်တော်တို့ကိုတုံ့ပြန်ချက်ပေး.
မတ်လ 31, 2009 တွင် 2:06 ညနေ
I have recently upgraded this new version and it is not working.
မတ်လ 31, 2009 တွင် 9:42 ညနေ
We have created an FAQ page and I have added the standard answer to this question, basically try to explain what to check in this case.
A link to your site would have been very helpful.
ဧပြီလ 1, 2009 တွင် 12:39 ညနေ
Thank you for your first class support. With your patience and help, Transposh is now working perfectly.